Wikileaks Oo Daabacday Emailo Laga Xadey Xisbiga AK Ee Uu Hogaamiyo Madaxwayne Erdogan | Berberatoday.com
Wikileaks Oo Daabacday Emailo Laga Xadey Xisbiga AK Ee Uu Hogaamiyo Madaxwayne Erdogan
Hargeysa(Berberatoday.com)-Shabakada faafisa xogaha siraha ah ee dowladaha ee Wikileaks ayaa Salaasadii shalay shaacisay in ka badan 200 kun oo Email iyo lifaaqyo la socda oo laga jabsaday Emailada Xisbiga Xaakimka Turkiga ee AK party.
Xogtan ayey shabakada Wikileaks sheegtay in ay ku jiraan emailadii madaxda xisbiga Erdogan laga soo bilaabo sanadkii 2010 illaa bilowgii bishan July ee aanu ku jirno.
Shaacinta emailadan oo gaadhaya 294,546 ayaa lagu soo beegay xili wadanka Turkiga ay ka socdaan hawlgalo dawlada ay ku xidh-xidheyso dadka mucaaridka ah ee lala xidhiidhinayo inay ku lug lahaayeen inqilaabkii dhicisoobay.
Wallow ay Wikileaks Isniintii ka hor in taanay xogtan daabicin ay sii sheegtay inay xogtani tahay mid wax badan ka iftiimineysa sirta xisbiga Erdogan, hadana emailadan ayaa intooda badan u muuqda kuwo ka hadlaya arrimaha Xisbiga AK Party ee siyaasadooda ku aadan xidhiidhka caalamka.
Emailadan kuma jiraan xog la xadhiidhta Inqilaabkii dhicisoobay ama weliba xog ku saabsan mucaaridka dalkaasi Turkiga.